जापान मा शरद पोशाक! जापानमा शरद duringतुमा तपाईले के लगाउनु पर्छ? - Best of Japan
यदि तपाई शरद Japanतुमा जापान जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले कस्तो किसिमको कपडा तयार गर्नु पर्छ? यदि यो शरद isतु हो भने, यो सेप्टेम्बर, अक्टुबर वा नोभेम्बरमा भर पर्दै वस्त्रहरू फरक फरक हुन्छन्। यस पृष्ठमा, म जापानी को शरद clothesतु कपडा ठोस फोटो संग परिचय गर्दछु। तपाईको यात्राको लागि तयारी गर्दा कृपया यसलाई सन्दर्भित गर्नुहोस्।
लुगा तयार पार्न तपाई कुन महिना यात्रा गर्नुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ
शरद wearतुमा लगाउने लुगाका उदाहरणहरू
शरद hotतु तातो गर्मी देखि चिसो जाडोमा संक्रमण अवधि हो। शरद Inतुमा, यो बिस्तारै चिसो हुनेछ, त्यसैले तपाइँको लुगाहरू एकदम फरक हुनेछ तपाइँ कुन महिना यात्रा गर्ने आधारमा।
यदि तपाइँ सेप्टेम्बर को पहिलो आधा मा यात्रा, जापान को जलवायु अझै पनि राम्रो गर्मी छ। धेरै जापानीहरू अझै पनि यस अवधिमा छोटो-बाहुको शर्ट लगाएका छन्। यद्यपि, वर्षाका दिनहरू बढ्दै जाँदा, आँधी पनि आउँदछ, त्यसैले त्यहाँ चिसो दिन पनि छ। कार्डिगनहरू, मुख्यतया महिलाहरू जस्ता कोट लगाउने मानिसहरू विस्तारै बढ्नेछ।
सेप्टेम्बरको उत्तरार्धमा, कूलर दिनहरू बिस्तारै बढ्नेछ। धेरै व्यक्तिहरू शरद clothesतुका लुगाहरू लगाउँछन्, शरद fashionतु फेसनमा रुचि राख्ने युवा युवतीहरूको साथ।
अक्टुबरमा, ओकिनावा र अन्य बाहेक केही व्यक्तिले छोटो-बाहुको शर्ट लगाउँदछन्। होक्काइडो वा होन्शुको उच्च भूमिमा शरद् पातहरू भेट्न आएका पर्यटकहरूले ज्याकेट, जम्पर लगाउने छन् र यस्तै अरू पनि लगाउँदछन् कि तिनीहरू चिसो मौसममा पनि ठीक हुनेछन्।
नोभेम्बरको पहिलो आधामा, अधिक व्यक्तिहरूले ज्याकेट, जम्परहरू लगाउनेछन्। नोभेम्बरको उत्तरार्धमा, जाडो धेरै नजिक छ। कोट लगाउने व्यक्तिहरू सहरी क्षेत्रमा पनि धेरै बढ्छन्। अर्कोतिर, जाडो होक्काइडो र होन्शुको उच्च भूभागमा आइपुगेको छ। धेरै व्यक्तिले ज्याकेट वा ओभरकोट लगाउँदछन्।
निम्नलिखित तस्बिरहरूले जापानीहरूले शरद whatतुमा कस्तो खालका लुगा लगाउँदछन् भनेर देखाउँदछ। सेप्टेम्बरको पहिलो आधा मा, त्यहाँ गर्मी जस्तै कपडा हुन सक्छ (जस्तै छोटो-बाहिरी शर्ट) यी भन्दा।
कपडा थोरै फरक छ तपाइँ जापान मा जानको आधारमा। यदि तपाईं होन्शु, शिकोकू, चुगोकु क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने, कृपया यी फोटोहरूलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। तपाईं तातो वा चिसो छ कि छैन विचार गर्नुहोस्, र तपाईं के लुगा ल्याउने निर्णय गर्नुहोस्।
यदि तपाईं होक्काइडो वा होन्शुको उच्च पहाडहरूमा जानुभयो भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं यी चित्रहरू भन्दा चिसो मौसमको लागि बाक्लो लुगा तयार पार्नुहोस्।
तल शरद .तु मा मासिक मौसम को बारे मा लेख छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्।